ရွှေဘုံပေါ်မှာ အသပြာထုတ်ကို ခေါင်းအုံးလုပ် ဒေါ်လာကို မွေ့ရာလိပ်ပြီး အိပ်ခဲ့တဲ့ သူဌေးသား – WunYan
တစ်ချိန်က ရွှေဘုံပေါ်မှာအသပြာထုတ်ကို ခေါင်းအုံးလုပ် ဒေါ်လာကို မွေ့ရာလိပ်ပြီး အိပ်ခဲ့တဲ့ သူဌေးသား ၊ မရှိဆိုတဲ့ စကားကို မကြားဖူးအောင်ထိ ပြည့်စုံတဲ့ သူဌေးသား သူဌေးသမီးတွေ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်ခဲ့တဲ့ သူဌေးသား၊ လက်ညှိုးထိုး ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့ သူဌေးသား ၊ ဟင်းခွက် တစ်ရာနဲ့စားခဲ့တဲ့ သူဌေးသား၊ အကောင်းဆုံး စားဖိုမှူး တွေရဲ့ လက်ရာတွေကို တစ်နေ့တစ်ခြား မရိုးရအောင် စားခဲ့တဲ့သူဌေးသား။
တောနက်ထဲက ဓနိထန်းရွက် ကာထားတဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ၀ါးကျောင်းပေါ်မှာပဲ ဓမ္မကိုအဖော်ပြုပြီး ပျော်ရွှင်ရတဲ့ ပီတိတွေကို လောကမှာ ဘာနဲ့ အစားထိုးနိုင်ပါအံနည်း…….
ခမည်းတော်နှင့် မယ်တော်ခမျာ ဝမ်းနည်းဝမ်းသာဖြင့် လျှောက်တင်ရပြီလေ” သားရေ အဖေ အမေတို့ ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ သန်းပေါင်းများစွာသော စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေ ကို သားကျောင်းပြီးရင် အမွေအားလုံး လွဲပြောင်းတော့မလို့
စာချုပ်စာတမ်း ရှေ့နေတွေနှင့်တကွ အဆင်သင့် လုပ်ထားနေတဲ့ကြားက ရဟန်းဝတ်သွားတော့ အဖေ အမေတို့ မျှော်လင့်ချက်တွေအားလုံး သဲထဲရေသွန်သလို ဖြစ်ရပြီပေါ့ကွယ် သားရေ အဖေ အမေတို့လည်း အသက်ကြီးနေပါပြီကွယ် ပြန်သေချာ စဉ်းစားပါအုန်းနော်..” လို့မိဘတွေ အတန်တန် ပြောဆိုခဲ့ပေမယ့် သူဟာ အမှန်တရားကို ရှာဖွေချင်တဲ့ စိတ်ကပြင်းပြနေလေတော့ သန်းပေါင်းများစွာသော စည်းစိမ်တွေနှင့် မိဘတွေရဲ့ မေတ္တာ ကို ဥပေက္ခာပြုပြီး “အသေမဦးခင် ဥာဏ်ဦးရမည်”လို့ ထိုင်းဆရာတော် Ajahn Chah ရဲ့တရားတွေက သူ့ရဲ့နားထဲမှာ အထပ်ထပ် ကြားလေတော့ “မရဏာနုဿတိ” ကို နှလုံးသွင်းပြီး သပိတ်တစ်လုံး သင်္ကန်း တစ်ထည်တည်း နဲ့ တောရပ်မြိုင်သွားပြီး ထိုင်းဆရာတော် Ajahn Chah ကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြုပြီး တောထဲမှာ တရားအားထုတ် ခဲ့တဲ့ ရဟန်းငယ်ပေါ့ ခုတော့ နိုင်ငံတကာကြွပြီး တရားပြတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်နေပါပြီ…
တစ်ချိန်တုန်းကတော့ ကမ္ဘာ့မီဒီယာလောကကို လှုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ သူဌေးသားရဟန်းငယ်ပေါ့… သတင်းမျက်နှာဖုံးပေါ်မှာစာလုံးကြီးနဲ့ သူဌေးသား ရဟန်းဝတ်တဲ့အကြောင်းတွေ ပလူပျံခဲ့ဖူး တဲ့ ဆရာတော်ပါ။
Credit : Ashin Pannathiha
တဈခြိနျက ရှဘေုံပျေါမှာအသပွာထုတျကို ခေါငျးအုံးလုပျ ဒျေါလာကို မှရေ့ာလိပျပွီး အိပျခဲ့တဲ့ သူဌေးသား ၊ မရှိဆိုတဲ့ စကားကို မကွားဖူးအောငျထိ ပွညျ့စုံတဲ့ သူဌေးသား သူဌေးသမီးတှေ ၀ိုငျးဝိုငျးလညျခဲ့တဲ့ သူဌေးသား၊ လကျညှိုးထိုး ဘာမဆိုဖွဈနိုငျခဲ့တဲ့ သူဌေးသား ၊ ဟငျးခှကျ တဈရာနဲ့စားခဲ့တဲ့ သူဌေးသား၊ အကောငျးဆုံး စားဖိုမှူး တှရေဲ့ လကျရာတှကေို တဈနတေ့ဈခွား မရိုးရအောငျ စားခဲ့တဲ့သူဌေးသား။
တောနကျထဲက ဓနိထနျးရှကျ ကာထားတဲ့ ကွမျးတမျးတဲ့ ၀ါးကြောငျးပျေါမှာပဲ ဓမ်မကိုအဖျောပွုပွီး ပြျောရှငျရတဲ့ ပီတိတှကေို လောကမှာ ဘာနဲ့ အစားထိုးနိုငျပါအံနညျး…….
ခမညျးတျောနှငျ့ မယျတျောခမြာ ဝမျးနညျးဝမျးသာဖွငျ့ လြှောကျတငျရပွီလေ” သားရေ အဖေ အမတေို့ ပိုငျဆိုငျ ထားတဲ့ သနျးပေါငျးမြားစှာသော စညျးစိမျဥစ်စာတှေ ကို သားကြောငျးပွီးရငျ အမှအေားလုံး လှဲပွောငျးတော့မလို့
စာခြုပျစာတမျး ရှနေ့တှေနှေငျ့တကှ အဆငျသငျ့ လုပျထားနတေဲ့ကွားက ရဟနျးဝတျသှားတော့ အဖေ အမတေို့ မြှျောလငျ့ခကျြတှအေားလုံး သဲထဲရသှေနျသလို ဖွဈရပွီပေါ့ကှယျ သားရေ အဖေ အမတေို့လညျး အသကျကွီးနပေါပွီကှယျ ပွနျသခြော စဉျးစားပါအုနျးနျော..” လို့မိဘတှေ အတနျတနျ ပွောဆိုခဲ့ပမေယျ့ သူဟာ အမှနျတရားကို ရှာဖှခေငျြတဲ့ စိတျကပွငျးပွနလေတေော့ သနျးပေါငျးမြားစှာသော စညျးစိမျတှနှေငျ့ မိဘတှရေဲ့ မတ်ေတာ ကို ဥပက်ေခာပွုပွီး “အသမေဦးခငျ ဉာဏျဦးရမညျ”လို့ ထိုငျးဆရာတျော Ajahn Chah ရဲ့တရားတှကေ သူ့ရဲ့နားထဲမှာ အထပျထပျ ကွားလတေော့ “မရဏာနုဿတိ” ကို နှလုံးသှငျးပွီး သပိတျတဈလုံး သင်ျကနျး တဈထညျတညျး နဲ့ တောရပျမွိုငျသှားပွီး ထိုငျးဆရာတျော Ajahn Chah ကို ဥပဇ်စြာယျပွုပွီး တောထဲမှာ တရားအားထုတျ ခဲ့တဲ့ ရဟနျးငယျပေါ့ ခုတော့ နိုငျငံတကာကွှပွီး တရားပွတဲ့ ဆရာတျောတဈပါးဖွဈနပေါပွီ…
တဈခြိနျတုနျးကတော့ ကမ်ဘာ့မီဒီယာလောကကို လှုပျကိုငျခဲ့တဲ့ သူဌေးသားရဟနျးငယျပေါ့… သတငျးမကျြနှာဖုံးပျေါမှာစာလုံးကွီးနဲ့ သူဌေးသား ရဟနျးဝတျတဲ့အကွောငျးတှေ ပလူပြံခဲ့ဖူး တဲ့ ဆရာတျောပါ။